Saafi Films - News: Ra,isul wasaare Saacid oo maanta la kulmay haweenka iyo bulshada rayidka ah
Ra,isul wasaare Saacid oo maanta la kulmay haweenka iyo bulshada rayidka ah
Ra�isul wasaaraha Jamhuuriyada Soomaaliya Mudane Cabdi Faarax Shirdoon Saacid ayaa kulan xasaasi ah la qaatay Ururada Bulshada Rayidka iyo Haweenka Qaranka Soomaaliyeed.
Kulanka oo warbaahinta ay banaanka ka jogtay ayaa waxaa uu dhexmaray Ra�isul wasaare Shirrdon iyo Ururada Bulshada Rayidka oo ay la socdeen haweenka qaranka Soomaaliya , waxaana si weyn looga hadlay doorka ay Bulshada Rayidka ah ku leeyihiin ka qeyb qaadashada horumarka dalka.
Mid ka mid ah Haweenka oo ku hadashay Magaca Ururada Bulshada Rayidka ah ayaa sheegtay in kulanka diirada lagu saaray arimo ay ka mid yihiin sidii Bulshada u garab istaagi lahayd dowlada cusub iyo sidoo kale in Haweenka ay helaan Xaqa ka maqan.
Haweeneydan oo lagu magacaabo Qadro ayaa sheegtay in Ra�isulw asaaraha uu balan qaaday inuu wax ka qaban doono xaqa la duudsiiyay haweenka , isagoo kaashanaya Madaxad cusub ee Dolwada.
Cabdi Xaaji oo ah Ninka u qaabilsan Ra�isulw asaaraha dhanka warfaafinta ayaa sheegay in Ra�isul wasaarah uu kulan la qaatay Haweenka iyo Bulshada Rayidka ah , waxaana uu cadeeyaya afayeenka Xafiiska Ra�isul wasaaraha in ay Bulshada muujiyeen taageerada ay u hayaan Ra�isulw asaaraha cusub iyo Dowladiisa.
Goob Doon oo hadalkiisa sii wata ayaa shaaciyay in haweenka ay Ra�isul wasaaraha kala hadleen sidii loo siin lahaa xaqa ka maqan , waxaana uu Mudane Saacid u balan qaaday inay heli doonaan waxa ay xaq u leeyihiin Haweenka iyo dhamaan Ururada Bulshada Rayidka ah.
4,565,316 unique visits